JINGHPAW KASA: ဂေါ်ရီကျေးရွာတွင် ဗမာစစ်သား (၈) ဦးသေဆုံး
ကချင်ပြည်နယ် အေကိုင်အိုအစိုးရ အနောက်ပိုင်းတိုင်း တပ်မဟာ (၂) အုပ်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်သော မိုးကောင်း - ကားမိုင်းလမ်း ဂေါ်ရီကျေးရွာတွင် နိုင်ဝင်ဘာ (၁၄) ရက်နေ့၌ ဖြစ်ပွားသော ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၆) မှ မျိုးချစ်ရဲဘော်များနှင့် ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်များ၏ တိုက်ပွဲတွင် ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်ဘက်မှ (၈) ဦးသေဆုံး ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များမှ စစ်အင်အားအပြည့် တင်ဆောင်လာသော ဗမာအစိုးရ စစ်ကားတစ်စီးကိုလည်း ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီး နိုင်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဤဂေါ်ရီ ကျေးရွာ၌ပင် ညနေပိုင်း (၄း၃၀) နာရီအချိန်၌ ကေအိုင်အေမျိုးချစ်ရဲဘော်များနှင့် ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်တို့ ဆက်လုက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
(8) Burmese soldiers died in Gauri village, it is located between Mogawng and Kamaing road, which is under KIA (2nd) Brigade area, on 14th November according to the KIA front-line officer report. KIA (6) battalion soldiers exploded one of the Burmese military lorry cars with full of soldiers. At 04:30 PM on that day, there was battle again between KIA patriotic soldiers and Burmese Government intruder in that village.
ဒါဆို ရင်း၆က မျိုးချစ်ရဲဘော်တွေစားပေါက်ပိတ်တော့မှာပေါ့။ဘုရားသခင်ပြောင်းချီးပေးပါစေ
yes God always bless K.IO/K.I.A so KIA can kill burmeryuk ngapyithuk and make them to fertilizar for our kachin land(kachin country)